Kuxwayiswe abafundi ngobugebengu | News24
Kuxwayiswe abafundi ngobugebengu
PHOTO: suppliedUConstable Musa Mkhungo ekhuluma nabafundi.
ABAFUNDI besikole iFranklin Primary eMehlomnyama babe nenhlanhla yokuvakashelwa uConstable Musa Mkhungo ngoLwesibili ezobaxwayisa ngezokuphepha. Ufike lapha ehambisana noMduduzi Mchunu ongusihlalo weYouth Desk kanye noSlindile Gumede ongunobhala wayo iYouth Desk.
UConstable Mkhungo uxwayise abafundi ngokuthunjwa kwabantu, izikhali eziyingozi kanye nezidakamizwa.Abafundi baphinde banikwa amapheshana anezexwayiso, izincwadi zokufaka imibala kanye nezinsiza zokubhala. Leli phoyisa elithandayo ukusebenzisana nabantwana likholelwa ekutheni sihlale sikhona isidingo sokufundisa intsha nezingane ngobungozi bobugebengu.